Jony Ive Dhizaini Yeyero iPad Pro yechiitiko Chakakosha | IPhone nhau
Jony Ive dhizaina yero iPad Pro yechiitiko chakakosha
Nguva nenguva Cupertino anotangisa chisinganzwisisike chishandiso chiri pane zvakajairwa. Ichi chishandiso mune dzakawanda nguva inoitirwa kuunganidza mari yemubatanidzwa kana yechiitiko chakakosha. Pane dzakawanda nguva, zvirinani mumakore achangopfuura, Jony Ive agara aine zvakawanda zvekuita nemagadzirirwo.
Jony Ive, pamwe nechikwata chake, vakagadzira 12,9-inch iPad Pro ine muviri wealuminium unogoneswa neruvara rweyero. Pamwe neiyi iPad tinowana yeFrench yeganda Smart Cover yebhuruu. Iyo Apple Penzura iyo iri chikamu cheiyi seti inogadzirwa yeyero goridhe uye ichave iine tsvuku yeItaly mhuru yemuviri chifukidzo.
Iyi yero iPad Pro ichave yakasarudzika, yakanyorwa nerungano Edhisheni 1 ya1. Hukama huripo pakati peIve nemuyuziyamu hwatanga makore mazhinji. Muna 1990 yakaratidza prototype yefoni uye makore maviri gare gare kambani yakasaina Ive pamatanho ayo. Muna 2003, iyo Ive yakahwina mutengo ne Mugadziri weMubairo wegore kubva kuLondon Design Museum, kwaakawana rumwe ruzivo iye rwaari kunyorera mukugadzirwa kwekambani yeCompertino-based.
Mari inowanikwa kubva muiyi auction ichaenda kuLondon Design Museum, iyo Jony Ive ane hukama hwakanaka sezvaakashanda imomo kwemakore akati wandei. Zvinotarisirwa kuti iyi yakasarudzika IPad Pro pamwe nezvayo zvishandiso zvinogona kusvika panhamba pakati pezviuru gumi nezvishanu zvemapaunzi. Kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinyatsoda ' kubva Kubvumbi 28.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Jony Ive dhizaina yero iPad Pro yechiitiko chakakosha
Ndinoda ku !!
Pindura kune wendel